Shirkadda Diyaaradaha ee United Airlines ayaa ku dhawaaqday Duulimaad Cusub oo aan Joogsi lahayn oo ka bilaabanaysa Mareykanka kuna sii jeedda Urdun
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jordan War Degdeg ah » Shirkadda Diyaaradaha ee United Airlines ayaa ku dhawaaqday Duulimaad Cusub oo aan Joogsi lahayn oo ka bilaabanaysa Mareykanka kuna sii jeedda Urdun
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Jordan War Degdeg ah • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Amman Jordan ilaa Washington DC
Guddiga Dalxiiska Urdun (JTB) wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo duulimaad cusub oo toos ah, taasoo xitaa u sahlaysa socotada Mareykanka inay u duulaan Jordan. United Airlines waxay bixin doontaa duulimaadyo toos ah Washington DC ilaa Amman laga bilaabo May 5, 2022, waxayna duuli doontaa saddex jeer toddobaadkii. Kani waa duulimaadkii ugu horreeyey ee toos ah oo isku xira labada magaalo madax.
Sahan dhowaan Guddiga Dalxiiska Urdun ee la dhammaystiray wuxuu tilmaamay in 2022 ay diyaar u tahay inay jabiso diiwaannada safarka ee DC.
Boqolkiiba 65 ka mid ah hawl -wadeennada ganacsiga ee Mareykanka waxay haystaan ​​tigidhada safarka dayrta 2021 ilaa Jordan, marka la barbar dhigo kaliya 15 boqolkiiba xilli -ciyaareedkii ka horreeyay.
Iyada oo la raacayo borotokoollo cad oo COVID ah oo ka jira dalka oo dhan, dadka safarka ah waa inay ku raaxaystaan ​​booqashada Urdun.
"Waxaan ku faraxsannahay inaan caasimadda cusub u bilowno caasimadda, Washington DC ilaa Amman, adeeg, taas oo sahlaysa inaan dad badan ku xirno Urdun iyo hidaha iyo dhaqanka hodanka ah ee dalku leeyahay inuu bixiyo," ayuu la wadaagay Patrick Quayle, Madaxweyne Ku -xigeenka Sare ee Caalamiga ah Shabakad iyo Isbahaysi.
Ku dhawaaqista ka timid United waxay muujineysaa kalsoonida diyaaradda ee meesha ay aadeyso iyadoo safarada caalamiga ah ay bilaabayaan inay soo qaadaan kadib burburkii masiibada. Tallaabadan ayaa sidoo kale taageertay sahan dhowaan Guddiga Dalxiiska Urdun uu dhammaystiray oo tilmaamay in 2022 ay diyaar u tahay inay jebiso diiwaannada safarka ee meeshii loo socday. Baadhitaanka ayaa sidoo kale muujisay in 65 boqolkiiba hawl -wadeennada ganacsiga ee Mareykanka ay haysteen tigidhada safarka dayrta 2021, marka la barbar dhigo kaliya 15 boqolkiiba xilli -ciyaareedkii ka horreeyay.
“Waxaan ku faraxsannahay inaan ku soo dhaweyno sidey dhaxalka Jordan si aan gacan uga geysanno furitaanka ganacsiga u dhexeeya labada caasimadood ee Washington DC iyo Amman. Waxaan mar walba ku soo dhoweyneynaa safrayaasha Mareykanka Boqortooyada inay la kulmaan dhaqanka cajiibka ah iyo kala duwanaanshaha Urdun ay tahay inay bixiso. ” La wadaago Abed Al Razzaq Arabiyat, Maareeyaha Agaasimaha Dalxiiska Urdun.
Malia Asfour, oo ah Agaasimaha Guddiga Dalxiiska Urdun ee Waqooyiga Ameerika ayaa tiri: "Waxaan sugeynaa inaan ku soo dhaweyno United Airlines Amman, oo aan ka wada shaqeyno inaan keenno xitaa safarro badan si ay u soo maraan dalkeenna cajiibka ah." “Iyada oo la raacayo borotokoollo cad oo COVID ah oo ka jira dalka oo dhan, dadka safarka ah waa inay ku raaxaystaan ​​booqashada Jordan. Tani waa tallaabo weyn oo lagu xirayo caasimadda Urdun iyo Washington DC, laguna dhiirri-gelinayo dadka socotada ah ee Mareykanka inay ballansadaan waayo-aragnimo safar oo macno leh meelaha soo jiidashada leh ee adduunka sida Petra, Wadi Rum iyo Badda Dhimatay. ”
Si aad wax badan uga ogaato jidka cusub, booqo united.com/en-us/new-routes.
Si aad wax badan uga ogaato macno leh u safraya Jordan booqo websaydhka Visitjordan.com.
Linda Hohnholz ayaa tifaftire u ahayd madaxa eTurboNews sanado badan.
Waxay jeceshahay inay wax qorto oo taxaddar siiso faahfaahinta.
Waxay sidoo kale mas'uul ka tahay dhammaan waxyaabaha ku jira qiimaha iyo war -saxaafadeedka.